Shan faa iidooyin ah dhalooyinka quraaradaha ku jira suuqa baakadaha
Waqtigan xaadirka ah, qaybta baakadaha ee suuqa gudaha, qalabka baakadaha ee qalab kala duwan, gaar ahaan balaastigga (qaabdhismeedka: cusbada synthetic, plasticizer, xasiliyaha, midabka) baakadaha dhalada, waxay haysaa kala bar suuqa ugu hooseeya ee warshadaha sharaabka. Jiangshan, m ...
Dhalooyinka quraaradaha waxaa badanaa loo isticmaalaa baakadaha alaabada ku jirta cuntada, khamriga, cabitaanka, dawooyinka iyo warshadaha kale. Dhalooyinka quraaradaha ah iyo gasacadaha waxay leeyihiin xasilooni kiimikaad oo wanaagsan mana faafayaan gudaha. Amaan ayey u yihiin inay isticmaalaan cidhiidhi xagga hawada ah iyo sare ...
Isbedelka kobaca 2020-2025 iyo saadaasha suuqa dhalada quraaradaha
Dhalooyinka quraaradaha iyo weelka dhalooyinka ayaa badanaa loo isticmaalaa warshadaha khamriga iyo kuwa aan aalkolada lahayn, taas oo ilaalin karta firfircoonida kiimikada, madhalaysnimada iyo awood la’aanta. Qiimaha suuqa ee dhalooyinka quraaradaha iyo weelasha dhalada ee sanadka 2019 wuxuu ahaa US $ 60.91 billion waxaana la filayaa inuu gaaro US $ 77.25 billion ...